usethembe idlozi obeyisilomo se-bucs - Ilanga News
Home Ezemidlalo usethembe idlozi obeyisilomo se-bucs
usethembe idlozi obeyisilomo se-bucs
UPATRICK Phungwayo esagijima kwi-Orlando Pirates.
UMDLALI ozakhele udumo egijima kwi-Orlando Pirates uthi useshiyele edlozini kube yilona elizonquma ngekusasa lakhe ebholeni.
UPatrick Phungwayo (32) odlala ophondweni lwesokunxele emuva, ugcine ukubonakala ebholeni lakuleli egijima kwiFree State Stars ngesizini eyedlule.
Emuva kokuba le kilabhu igengcwe yizembe lo mdlali uvele wanyamalala ebholeni.
Engxoxweni ekhethekile abe nayo naleli phephandaba, udalule isizathu okuyisona esenze wanyamalala.
“Okwamanje kunzima ukusho ukuthi ngiliyekile ibhola noma cha kodwa ngokwami kangiliyekile.
“Emuva kokuba ngishiye kwi-Free State Stars ngibone kungcono ngilandele ubizo lwami ngoba abantu abadala bese befuna ngiyokwenza umsebenzi wabo.
“Njengoba benginyamalele bengimatasa nawo yize kukhona engingakakuqedi.
“Ebengiphezu kwakho bekuwukuvuma idlozi ngilamukela.
“Le nto kayingiqalanga manje, iqale ukungihlupha ngimncane kushwelezwe bacelwe ukuba bangiyeke ngize ngibe yindoda ngibe nomuzi wami.
“Empeleni le nto yehlela kimina nje, yingoba abazali bami bebeyiziba bengayinaki yagcina isihlupha mina.
“Kodwa-ke akukho engingakwenza kufanele ngiyiqhube.
“Ngesizini ezayo ngizimisele ngokubuyela ebholeni kodwa konke lokho kulele kubona abantu abadala. Ngisazocela kubona kuqala, impendulo ngizoyithola kubona. Kodwa ukujima ngiyajima futhi ngisesimweni esihle.
Ngiphazanyiswe yiyona i-coronavirus ethikameze wonke umuntu,” kusho uPhungwayo.
Limbuza leli phephandaba ukuthi ngabe useqalile yini ukusiza abantu ngokwesintu uthe: “Okwamanje bengingakafiki kulelo zinga kodwa ngiyacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ku-zoya lapho, kuzoncika ekutheni abantu abadala bona bafunani.
“Yinto engingeke ngiyibalekele lena ngoba iyisiphiwo sami. Uma ungalandela umlando wami ebholeni ngilimale kaningi ngendlela engaqondakali.
“Ngike ngaya kwiPanionios yaseGreece ngiyodlala khona.
“Yilapho bengikhombise khona abantu abadala ukuthi banamandla kangakanani bavukwe yisikhwele ngagcina ngibuyile.”
Previous articleKUZOCACISA i-bog ngokuholelwa kwabadlali be-psl ngamakilabhu
Next articleuskhosana wamukela ukungenela ese-sascoc